Australia Oo Xulatay 5 Fanaan Oo Soomaaliyeed - Daryeel Magazine
Australia Oo Xulatay 5 Fanaan Oo Soomaaliyeed
Shirkad Laga Leeyahay Dalka Australia oo horumarisa fanka wadamada dunida sadexaad ka shaqaysa Ayaa Xog Ururin Ay Sameeysay Kadib Waxay sheegtay in ay Siinayaan Fursad lagu Horumarinayo fankooda 5 fanaan oo ka mida Kooxda Xidigaha Geesaka.ee ka dhisan Magaalada Hargaysa.
Sida Fursadani waxay u Sahlaysaa Shantan Fanaan ee Somalida Ah inay Helaan Ama La Siiyo Cardka Caalamiga ah ee Aqoonsiga Fanaanimo Kaasi oo guud ahaan fanaaniinta la siiyay ee ka soo jeeda Qaarada Africa Tiradoodu Dhantahay 43 fanaan, Waana Markii Ugu Horaysay ee fanaaniin Somali ahi ay Ka Mid Noqdaan dalada caalamiga ah ee kulmisa fanka iyo fanaaniinta Qaarada Africa.
Warbixinta Lagu sheegayna. Kala Xulashada Fanaaniinta Tirada Badan ee Kooxda Xidigaha geeska oo intooda badan aan kala dhicin islamarkaana bulshada somalidu Ay heesahooda Dhagaystaan, ayaa waxa ka mida
01. Maxamed Siciid Cabdi (Bk)
02. Nimcaan cabdiraxmaan xasan (Hilaac)
03. Yurub Mohamed Cabdi (Geenyo)
04. Khadra Cabdi Sinimo
05. Maxamed axmed Bakaal (Ciro)
Fanaaniinta Xiddigaha Geeska Oo muddo kooban jiray ayaa durba ka dhex muuqday bahda fanka, waxaana loo tiriyaa in ay yihiin kuwa ugu wanaagsan Geeska Afrika.
Balse Su,aasha Is waydiinta Mudan ayaa Ah. Arintani Ma ku keeni kartaa Kooxda Xidigaha geeska khilaaf maadaama ay ka maqanyihiin fanaaniin caan ah oo ka mid ah kooxda xidigaha geeska
Halkan ka daalaco sida ay u kala sareeyaan shantan Fanaan
Fitamiin D Yaraanta Dumarka Soomaaliyeed Microsoft Oo Si Rasmi Ah U Soo Bandhigtay Windows 10 Xikmado Xaqiiq Ah
Fruits-ka U Fiican Hooyada Uurka Leh
Xiliga uurka waxaa lagama maarmaan ah in hooyadu ay cunto cunnooyin nafaqo leh, kuwaasoo aan …